वातावरण:: Naya Nepal
वाशिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत, चीन र रुसको हावा सबैभन्दा खराब भएको बताएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि शुक्रबार भएको अन्तिम टेलिभिजन बहसका क्रममा उनले भारत, चीन र रुसको हावा सबैभन्दा खराब
पृथ्वीको दुर्लभ जनावरको फोटो खिच्न उच्च दक्षता हुनुपर्छ र उत्तिकै भाग्यमानी पनि। सेर्गेइ गोर्शकोभ दुवै हुन्- रुसको सुदुर पूर्वमा रहेको जङ्गलभित्र खिचिएको आश्चर्यजनक तस्बिरले त्यही पुष्टि गर्छ।यो तस्बिरले उनलाई यो वर्षको वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर अफ द
किसान दम्पतीको रिसोर्ट जस्तै घर !
३० असोज, चितवन । घरमा बस्दाबस्दै दिक्दार लागेका कतिपय मानिसहरु ‘रिफ्रेस’ हुन भन्दै रिसोर्टमा गएर एक–दुई रात भए पनि बिताउन रुचाउँछन् । तर घर नै रिसोर्ट जस्तो बनाए कस्तो होला ? यो प्रश्नको उत्तर
कोरोनापछि बाँझो जमिन हरियाली
गोरखा — बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–२ का दोर्जे गुरुङले एक दशकदेखि बाँझो रहेको जमिनमा यस वर्षबाट खेती थालेका छन् । पुर्ख्यौली जमिनमा खेती गर्न छाडेर बारपाकमा किराना पसल चलाएका उनी कोरोना कहरपछि फेरि खेतबारीमै व्यस्त छन् ।
माईजोगमाईमा आलु भण्डारण केन्द्र स्थापना
मंगलबारे । इलामको माईजोगमाई गाउँपालिका—१ मा आलु भण्डारणका लागि रष्ट्रिक स्टोर स्थापना गरिएको छ । गाउँमा आलु भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुँदा समस्या भएपछि स्थानीय कालिका कृषि सहकारी संस्थाले आलु भण्डार (रष्ट्रिक स्टोर)को स्थापना गरेको
गण्डकी । विगतमा दशैँ र तिहारको समयमा रातो माटोसहित खोटो र कमेरोले घर रङ्गाउने प्रचलन हराउँदै गएको छ । विशेष गरी परम्परागत शैलीका ढुङ्गा, माटो तथा काठको प्रयोग गरी बनाइएका घरमा ती सामग्रीको प्रयोग
जडीबुटीले कोभिड–१९ निको पार्दैन। तर, यसको प्रयोगले भाइरसको वृद्धि कम गराउँछ, रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। अहिले विश्वमा कोभिड–१९ संक्रमित साढे तीन करोड नाघिसकेका छन्। मृत्यु हुने साढे १० लाख कटेका छन्। एक जना सक्रिय संक्रमित देखिएपछि